April 19, 2018 - TV Annapurna
आइपीएल : किंग्स इलेभन पञ्जाबद्वारा सनराइजर्स हैदराबादसामु १९४ रनको लक्ष्य
April 19, 2018 April 19, 2018 TV-Annapurna
इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) क्रिकेटमा किंग्स इलेभन पञ्जाबद्वारा सनराइजर्स हैदराबादसामु १९४ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। घरेलु मैदान पञ्जाब क्रिकेट एशोसियसन स्टेडियममा टस जितेर व्याटिङ्गमा उत्रिएको पञ्जाबले क्रिश गेलको शतक मद्दतमा १९३ रनको योगफल तयार पार्यो। निर्धारित २० ओभरमा ३ विकेट गुमाएको पञ्जाबका लागि क्रिशले नटआउट १०४ रन बनाए। ६३ बल खेलेका उनले सर्वाधिक ११ छक्का प्रहार गरे। खेलमा उनले १ चौका मात्रै प्रहार गरे। करुण नैरले ३१ रन जोडे। २१ बल खेलेका उनले ३ चौका र १ छक्का प्रहार गरे। केएल राहुल र मयान्क अग्रवाल १८ रनमा आउट भए।
आगलागीबाट एकको मृत्यु, पाँच घरगोठ नष्ट
April 19, 2018 Annapurna TV
सरुमारानी गाउँपालिका–६ आटीओदारमा बिहीबार दिउँसो भएको आगलागीमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय कमल थापाको घरबाट सल्लकेको आगोले ७५ वर्षीय रेवतबहादुर थापाको घटनास्थलमै जलेर मृत्यु भएको हो । आगोले कमल, दीपक, निमबहादुर, यमबहादुर थापा र धनबहादुर मरछ्याङ्दी मगरको घरगोठ पूर्णरुपमा जनेर नोक्सान भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी राजेन्द्र पोख्रेलले बताए । उनका अुनसार आगलागीमा दुई दर्जन बढी पशुचौपाया समेत मरेका छन् । हावाहुरी चलेको र दिउँसोको समय भएकाले स्थानीय र प्रहरी आगो निभाउन प्रयास गर्दागर्दै पनि ठूलो क्षति भएको प्रोख्रेलले बताए । अहिले आगो पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आएको र क्षतीको…
नेपालको सीमा मिचेको भन्दै नरेन्द्र मोदीविरुद्ध बेलायतमा उजुरी
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले बेलायतको ४ दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई उजुरी पत्र पठाएको छ। मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले विहीबार बेलायती राजदूतावासका डेपुटी एम्बेसेडर ब्यारी डेभिडसनमार्फत मोदीविरुद्ध बेलायतमा उजुरी दिएको हो। पत्र बुझ्दै उपराजदूत ब्यारीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्र तत्काल लण्डन पठाइएको बताए। बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा बेलायती उपनिवेशमा रहेको नेपाली भुभाग सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारतसँगै स्वतन्त्र भएकोमा भारतले तत्काल उक्त भुभागमा पुन उपनिवेश कायम गरेको भन्दै सन् १९५० जुलाई ३१ को नेपाल–भारत सन्धिको धारा ८ ले…
April 19, 2018 April 20, 2018 TV-Annapurna
स्वच्छ छवि सरल तर खरो स्वभावका कारण अघिल्लोपटक लालबाबु पण्डितले निक्कै वाही वाही पाए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारका पालामा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका पण्डित सफल मन्त्रीका रुपमा चिनिन्छन । विदेशी ग्रिनकार्ड र पिआर लिएका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने पण्डितको योजना सबैभन्दा बढि लोकप्रिय बनेको थियो । पहिलो पटक मन्त्री बन्दा धेरै जनताको मन जितेका पण्डितले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका शेखर कोइरालालाई हराएपछि फेरि चर्चित बनेका थिए । उनै लालबाबु पण्डित फेरि अर्कोपटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएका छन । उनै मन्त्री पण्डितसँग टिभी अन्नपूर्ण रिपोटर्र शर्मिला…
शैक्षिक प्रदर्शनीमा ज्योतीको प्रदर्शन, महोत्सवको नाममा विकृति
April 19, 2018 April 19, 2018 Annapurna TV
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका मसुरियामा शैक्षिक तथा सांस्कृतिक महोत्सवमा काम कुरो एका तिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भने जस्तै भएको छ । वडा नं ८ लिक्मामा चैत ३० गते देखि सुरु भएको महात्सवमा शैक्षिक गतिबिधिहरुका साथै शिक्षा स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको महोत्सवमा ठिक उल्टो देएिको छ । शिक्षाको बहस संगैै स्थानीय भाषा, संस्कृति नृत्य र परम्परागत परिकारहरूको प्रर्दशन गरी यहाँको मौलिक कला संस्कृति, साहित्यको प्रबर्दन हुने आशा गरेका स्थानीय वुदिजीविहरुले यो महोत्सवले विसंगति लाई प्रस्तुत गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार गायीका ज्योती मगरले प्रस्तुती दिए पछि महोत्सबको थप…
फरार अभियुक्त दीपक मनाङ्गे पक्राउ परेका छन् । प्रदेश ४ का प्रदेशभासभा सदस्य समेत रहेका उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो । गत माघमा सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष जेल सजाय गर्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको सजाय सदर गरेको थियो । यसलगतै फरार भएका उनले सांसदको सपथ समेत लिएका छैनन् । मनाङ्गेलाई स्वयम्भू क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको परिसरका प्रवक्ता एवं डीएसपी मोहन थापाले पुष्टि गरे । दीपक मनाङ्गेको समूहले ०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार होनेको थियो । प्रहरीले मनाङ्गे समूहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता…
२०७४ असारमा भएको स्थानीय तह चुनावमा बाजुराको गौमुल गाउँपालिकामा एउटा फरक विषय पनि बहसमा थियो । गाउँपालिकाका थुप्रै बालबालिकालाई सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा र केहीलाई काठमाडौं ल्याएर समेत घरेलु नोकरको रूपमा काममा लगाइएको विषय पनि चुनावमा छिटफुट चर्चाको विषय थियो । गाउँपालिका गठन भएपछि वडा नम्बर ४ र ५ का अध्यक्षसहित प्रमुख, उप–प्रमुखले आफ्ना गाउँपालिकाका बालबालिका कहाँ–कहाँ छन् भनेर खोजीनिती गरे । वडा नम्बर ४ र ५ का अध्यक्षहरूले तत्कालै आ–आफ्ना वडाको विवरण संकलन गरेर गाउँपालिकामा बुझाए, अरूले बुझाउने क्रम जारी छ । २०७४ मंसीरसम्मको विवरण संकलन गरेर ‘गौमुल गाउँपालिकाबाट घरेलु…
नेपाली तथा भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता ( ई.पू.) विश्वको प्राचीन सिंधु( घाटी नदी सभ्यताहरू मध्येको एक प्रमुख सभ्यता थियो। यो हडप्पा सभ्यता र सिंधु(सरस्वती सभ्यताका नामले पनि जानिन्छ, हिन्दूका विभिन्न थरहरू हुन्छन्। ती थरहरू पनि विभिन्न गोत्रमा बाँडिएका छन्। उनीहरू आफू विभिन्न ऋषिमुनिका सन्तान भएको विश्वास गर्दछन्। त्यसैले उनीहरूका गोत्र पनि प्राचीन ऋषिमुनीहरूकै नाममा आधारित देखिन्छन्। गोत्र उनीहरूको कुल छुट्याउने एउटा भरपर्दो आधार हो। एकै जना बाट जन्मिएको ठानिने हुनाले एउटै गोत्र भएका मानिसहरूको बिच बिहावारी चल्दैन। नेपालमा जातका मानिसहरू बाहेक अरूले आफ्नो गोत्रको परवाह गरेको पाइँदैन। हिन्दु समाजमा गोत्र…
नुहाउने क्रममा डुबेर एक भारतीयको मृत्यु
अखिलेश कुमार यादव, रौतहत । रौतहत जिल्लाको बौद्धिमाइ नगरपालिकाको बन्कुलदेखि कोपवा जाने क्रममा पूलको खाल्डोमा बिहीबार डुबेर एक भारतीय कामदारको मृत्यु भएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय कोपवाका अनुसार रौतहटको बौद्धीमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर ५ मा रहेको नहरमा नुहाउने क्रममा हुलाकी राजमार्गमा काम गर्दै आएका अन्दाजी १८ वर्षको भागरित यादवको मृत्युु भएको हो ।
बजारको केन्द्रमै गाई मरेर दुर्गन्धीत, उठाउने कसले ?
कैलालीको बर्दगोरिया गाउपालिका २ बौनिया बजारको केन्द्र मानिने नयाबसपार्क नजिकै मृत गाई दुई दिनदेखि उठाइएको छैन । निर्माणाधिन बौनिया कृषि उपज थोक तथा खुद्रा बजारको भवन नजिक गाई मरेको दुई दिन भइसक्दा पनि उठाउन कसैले चाँसो दिएका छैनन् । मरेको गाईको दुर्गन्धले बस्न गारो भइसकेकोे स्थानीयको भनाई छ । बर्दगोरिया गाउपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा छाडा पशु चौपाया नियन्त्रणका नाममा ५ लाख बजेट बिनीयोजन गरेको भएपनि हालसम्म कुनै चाँसो नदिएको स्थानीय पत्रकार उमेश थापाले बताए । यस विषयमा बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिले पनि चासो नदिएको स्थानीएको आरोप छ । मृत…